ဝက်အူများ၊ အခွံမာသီးများ၊ bolts၊ တွယ်ကပ်၊ ဝက်ဝံ၊ အဝတ်လျှော်စက်၊ လျှပ်စစ်အပိုပစ္စည်းများ၊ လက်သည်း၊ သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ ပရိဘောဂအစိတ်အပိုင်းများ၊ စက်ဘီးအပိုပစ္စည်းများ၊ အစားအစာ၊ သကြားလုံးရေတွက်ခြင်း၊ နို့သကြားလုံး၊ ဆေးပြားရေတွက်ခြင်းကဲ့သို့သော ဟာ့ဒ်ဝဲများနှင့် ပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများထုပ်ပိုးခြင်းအတွက် သင့်လျော်သည်။ စသည်တို့.
စက် အလိုအလျောက် Bolts ထုပ်ပိုးစက်
လည်ပတ်ပါ။ PLC Touch Screen (XINJE အမှတ်တံဆိပ်)
ဖြတ်တောက်ခြင်းအမျိုးအစား Zigzag ဖြတ်စက်
တံဆိပ်ခတ်ခြင်း။ အလျားလိုက် တံဆိပ်ခတ်ခြင်း- လိုင်းအမျိုးအစား၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း အကျယ် 10 မီလီမီတာ၊ဒေါင်လိုက်တံဆိပ်ခတ်ခြင်း- စိန်အမျိုးအစား၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း အကျယ် 10 မီလီမီတာ၊
အရှိန် 20-40 အိတ် / မိနစ်(ဝက်အူအရွယ်အစားနှင့် ထုပ်ပိုးမှုပမာဏပေါ်မူတည်၍)
အိတ်အရွယ်အစား အိတ်အကျယ်: 10-140mmအိတ်အရှည် 30-170 မီလီမီတာ
ဗို့အား 220V 50Hz 1P (အတည်ပြုရန်)
စက်အရွယ်အစား စိတ်ကြိုက်လုပ်ရန် လိုအပ်သည်။
ပါဝင်ပါသည် အင်ဗာတာ၊ ဓာတ်ပုံအာရုံခံကိရိယာ၊ အိတ်ဟောင်းတစ်ခုနှင့် တုန်ခါမှုပန်းကန်ပြားသုံးခု၊ ရက်စွဲဖဲကြိုးပုံနှိပ်စက်တစ်ခု
1. စက် feeder သည် Photoelectric eye ပါ၀င်သော ခရုပတ်တုန်ခါမှု hopper ဖြစ်ပြီး၊ ကုန်ကြမ်းများကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု စာရင်းပြုလုပ်သည်၊ photoelectric eye သည် ကုန်ကြမ်းကို ရေတွက်ပြီး နောက် work station သို့ ဝင်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။
2. ဖြည့်သွင်းခြင်းနှင့် အိတ်ဖွဲ့စည်းခြင်းအပိုင်းသည် နောက်ဆုံးအိတ်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအမျိုးအစားကို ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည် သုံးဖက်ပိတ်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု သို့မဟုတ် နောက်ကျောဗဟိုတံဆိပ်ခတ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
3. စက်တစ်ခုသည် တူညီသောအနံအိတ်ကို ပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း မတူညီသော ထုထည်ထုတ်ကုန်အတွက် သင့်လျော်စေရန်အတွက် အိတ်အရှည်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။
4. အကယ်၍ သင်သည် စက်တစ်ခုတည်းတွင် မတူညီသော အကျယ်အိတ်ကို ပြုလုပ်လိုပါက၊ ၎င်းသည် အိတ်ဟောင်းကို ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့လည်း ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့အား လွတ်လပ်စွာ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
1. အတွင်းထုပ်ပိုးခြင်း- ဖလင်ဖြင့် ထုပ်ပိုးခြင်း။
2. ပြင်ပထုပ်ပိုးမှု- ပင်လယ်ရေနှင့်ထိုက်တန်သောသစ်သားကိစ္စ
1. တပ်ဆင်ထားသော ကိရိယာပုံးနှင့် လက်စွဲစာအုပ်ကို ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း။
2. လေစုပ်စက်ဖြင့် စက်ကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက် ဖုန်မှုန့်များနှင့် အပိုင်းအစများကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။
3. သံချေးတက်သော အရည်ကို လိမ်းပါ။
4. စက်၏ အစိတ်အပိုင်းအချို့ကို ဖြုတ်ပါ။
5. အစိတ်အပိုင်း၊ ကိရိယာပုံး၊ ပင်မစက်အထုပ်အားလုံးကို ဖလင်ဖြင့် ဖြုတ်ပါ။
6. သစ်သားဘူး၏အောက်ခြေတွင် ဝက်အူပြုပြင်သည့်စက် ပါရှိမည်ဖြစ်သည်။
ယခင်- အလိုအလျောက်ဒေါင်လိုက် 1-8 အမျိုးအစား ဗီတာမင်ဆေးပြား / သကြားလုံး / နို့တက်ဘလက်များ / ဂျယ် / ဆေးတောင့် ရေတွက်ခြင်း ထုပ်ပိုးခြင်း စက်
နောက်တစ်ခု: semi-automatic အဖြည့်စက်
Bolts Sachet ထုပ်ပိုးခြင်းစက်